“JEREO NGE ZAHAY E !”
Nihetsiketsika tokoa ingahy Rajoelina mivady tato anatin’ny andro vitsivitsy te hampiseho hoe tsy rototra amin’ny resaka politika kanefa hita be izao fa tena paikady politika no ao ambadik’izany fihetsiketsehana izany. Inona moa izany ilay sary …Tohiny
Jono an-dranomasina:Vokatra 110 000 taonina isan-taona no voatrandraka
Mbola kely ny vokatra avy amin’ny hazandrano voatrandraka eto Madagasikara manoloana ny 100 000 000 taonina tadiavin’izao tontolo izao isan-taona. Zara raha manodidina ny 110 000 taonina isan-taona eo no vokatra vokarintsika eo amin’izay sehatry ny …Tohiny
Halatra jiro:VERY ROA MILIARA ARIARY NY JIRAMA
Tsy nanara-dalàna avokoa ireo tokantrano miisa 1804 tamin’ireo 4470 eto an-drenivohitra mampiasa ny jiro sy rano vokarin’ny orinasa Jirama rehefa nanaovana ny fisavana tampoka ny herinandro mialohan’ny fety teo. Tsy fanarahan-dalàna izay miseho amin’ny endrika …Tohiny
Ady amin’ny haintany:NANOLOTRA VOLA 16,9 TAPITRISA LIVRE STERLING NY ROYAUME-UNI
Manatona ny vanim-potoanan’ny maitso ahitra ireo firenena Afrika atsimo amin’izao fotoana izao, vokatry ny haintany mahery vaika nateraky ny tranga El-Nino nandritra ny amam-polo-taona maro. Ary amin’izao ankatoky ny fahatongavan’ny taona 2017 izao, olona maherin’ny …Tohiny